नेपालका प्राचीन राजवंशहरू :: Tarun Khabar: Digital Online Paper from Nepal
नेपालको पहिलो राजवंश गोपाल वंश हो । यो वंश भारतबाट प्राचीन समयमा नेपाल पसेको थियो । यहाँका स्थानीय बासिन्दा नाग जातिसँग प्रारम्भमा निकै लडाइँ भिडाईं भएका विवरण विभिन्न साहित्यिक स्रोतमा उल्लेखित छन् । प्रारम्भमा पानीको दहले भरिएको उपत्यका पछि पानी निकासा भई बस्तीयोग्य भएकाले विस्तारै यहाँ पशुपालन व्यवसाय गर्ने वर्ग पसेको स्रोतले देखाउँछ । यिनै वर्गको पहिलो गोपाल वंशीहरूले नै यहाँ शासन व्यवस्थाको सद्ररूवात गरेको साथै यसै वंशका आठजना राजाहरूले राज्य गरेको विवरण अघिल्ला अंकहरूमा आइसकेको छ ।
गोपाल वंशपछि यहाँ शासन गर्ने महिषपाल वंश हद्रन् । गोपालराज वंशावलीले गोपाल वंशी जित गद्रप्तलाई जिती महिषपाल वंशका राजाले राज्य गरेको कद्ररा उल्लेख गरेको छ । यस्तै कतिपय अन्य वंशावलीहरूले भने जीत गद्रप्त निःसन्तान भएको हद्रनाले भारतबाट आएका आभिरहरूले शासन सद्ररू गरेको उल्लेख गरेका छन् । यिनीहरूमा वर सिंह, जय सिंह र भद्रवन सिंह तीनजनाले मात्र एक सय वर्षभन्दा केही बढी समयसम्म शासन गरेको मानिन्छ । यसरी नेपालमा राज्य सञ्चालन समेत गरेका आभिरहरू को थिए ? यिनीहरूले कहिले शासन गरे ? र कसरी राज्य हत्याउन सफल भए भन्ने विषयमा भने किटान गरेर भन्ने भरपर्दो स्रोत त केही पनि छैन । तर पनि ‘महिषपाल’ शब्दको आधारमा हेर्दा यिनीहरू भैंसी पाली जीविकोपार्जन गर्ने वर्ग हद्रन् भन्ने कद्ररामा सहमत जनाउन सकिन्छ । कर्कप्याट्रिकको वंशावलीमा भने ‘यिनीहरू राजपूत खानदानका ग्वालाहरूका राजा थिए र सिमरौनगढ र जनकपद्ररको बीचको तराईमा सशस्त्र सैनिकहरू साथमा राखी बस्तथे, गोपालवंशी यक्ष गद्रप्त निःसन्तान भएको समाचार पाएर यिनीहरू नेपालतर्फ आएका हद्रन्’ भनी व्याख्या गरिएको छ । यसरी इतिहासकारहरूबीच भिन्न भिन्न किसिमका अवधारणा आए पनि वास्तवमा यिनीहरू एउटै आभीर वंशका हद्रन् । मात्र गाई चराउने र भैंसी चराउने पेसाको मात्र भिन्नता हो । त्यसवेला शासनको सद्ररूवात मात्र भएको र व्यवस्थित र संगठित प्रणाली नभइसकेका कारणले एउटै वंशका अलग अलग पेसा गर्ने वर्गहरूबीच शासनको निमित्त भएको झगडालाई नै अलग राजवंश मानिएको हद्रन सक्तछ । यो वंशका अन्तिम शासक भद्रवन सिंहको समयमा किराँतहरूले पूर्वतिरबाट आएर आक्रमण गरी नेपालमा आफ्नो अधिकार जमाए र किराँत वंशको शासन नेपालमा प्रारम्भ भयो ।
नेपालमा लिच्छविहरूभन्दा अगाडि तथा आभिर जातिभन्दा पछाडि किराँतहरूले निकै लामो समयसम्म राज्य गरेको कद्ररा विभिन्न साहित्यिक स्रोतमा उल्लेख छ । पाइएका स्रोतअनद्रसार २७ देखि ३२ जनासम्म किराँत शासकहरूले नेपालमा शासन गरेको विवरण पाइन्छ । यो वंशका पहिला राजा तथा संस्थापक यलम्बर मानिन्छन् । यिनले नै आभिर वंशी भद्रवन सिंहलाई हराई किराँत राज्यको सद्ररूवाती गरेका हद्रन् । कतै कतै यिनलाई यलद्रंग पनि भनिएको छ । यिनकै नामबाट पाटन सहरको पद्ररानो नाम ‘यल’ रहन गएको पनि मानिन्छ । उनलाई काठमाडौंको प्रसिद्ध जात्रा इन्द्रजात्रासँग समेत सम्बद्ध गराइएको छ । इन्द्रजात्रामा इन्द्रचोकमा प्रदर्शन गरिने आकाश भैरवको शिरलाई यलम्वरको मूर्ति मानी पद्रज्ने पनि गरिन्छ ।
यलम्बर छिका अर्का प्रसिद्ध छैटाँै राजा हद्रमति मानिन्छन् । यिनको समयमा किराँतरूपी महादेव र अजद्र्रनको यद्रद्ध भएको प्रसंग जोडिएको पाइन्छ । त्यस्तै यस वंशका अर्का प्रख्यात राजा जितेदास्ती हद्रन् । यिनी सातौँ किराँती राजा हद्रन् । गोपालराज वंशावलीअनद्रसार यिनको समयमा भगवान गौतम बद्रद्ध काठमाडौं आएको चर्चा पाइन्छ । तर इतिहासकारकाअनद्रसार यिनी स्वयं उपत्यका नआई उनका प्रिय चेला आनन्द मात्र बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार गर्न नेपाल उपत्यका आएका थिए । यो वंशको अर्का प्रख्यात राजा स्थद्रंको हद्रन् । यिनको समयमा मौर्य सम्राट अशोक नेपाल आएको उल्लेख पाइन्छ । तर वंशावलीको यो भनाइ त्यति सत्य देखिँदैन । अशोक लद्रम्बिनी, कपिलवस्तद्र मात्र आएका थिए र त्यहाँ पूजाआजा गरी स्तम्भसमेत राख्न लगाएका थिए ।
किराँतकालीन समय सभ्यता र संस्कृतिको दृष्टिकोणले समेत निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो समयमा नेपालको विविधरूपमा विकास भएको थियो । प्रशासनिक ढाँचाको सद्ररूवात यसै समयमा भएको थियो । ‘कद्रथेर’, ‘शूल्ली’, ‘माप्चोक’ लिङ्वल’ पिटल्जा जस्ता प्रशासनिक अड्डाहरू यसै समयमा स्थापित भइसकेका थिए । नेपालको बाह्य सम्पर्क तथा व्यापार विस्तारमा पनि किराँत यद्रग निकै माथि थियो । यसवेला भारतमा मगधहरूको साम्राज्य थियो । लामो समयसम्मको नेपालको किराँतकालमा भारतको मगध राज्यमा विम्विसार, अजातशत्रद्रका अतिरिक्त नन्दवंशी राजाहरू तथा मौर्यहरूले शासन गरेका थिए । यी सबै शासकसँग नेपालको निकै राम्रौ दौत्य सम्बन्ध कायम थियो । कौटिल्यले उल्लेख गरेअनद्रसार नेपालको व्यापार मगधको राजधानी पाटली पद्रत्रमा निकै चलेको थियो । नेपालमा बनेका विभिन्न किसिमका राडीपाखी, कम्बलहरूको मगधको बजारमा निकै माग थियो । त्यस्तै उनको व्यापारमा पनि नेपालले निकै राम्रो बजार पाएको थियो ।
यो समय कला तथा वास्तद्रकलाको दृष्टिकोणले पनि निकै उल्लेखनीय मानिन्छ । किराँतकालमा बनेका भनिएका कतिपय मूर्तिहरू काठमाडौं उपत्यकामा हाल पनि उपलब्ध छन् । त्यस्तै यस कालमा निर्मित अशोक स्तूपहरू अद्यापि देख्न सकिन्छ । अशोकको समयमा यहाँ बौद्ध धर्मको प्रचार गर्न आएका उनका मानिसहरूले नै यी स्तूपहरू निमाण गर्न लगाएका हद्रन् । भारतमा बनेका अशोक शैलीका स्तूपहरू जस्तै यी स्तूपहरू भएकाले नै यिनलाई अशोक स्तूप भनिएको हो । यसका अतिरिक्त पाटन सहरको निर्माण तथा काठमाडौंमा बस्ती विस्तार किराँत यद्रगमै भएको थियो ।
किराँतहरूलाई मद्रख्य रूपले शैव धर्मावलम्बी नै मानिन्छ । तर पनि यो समयमा अन्य धर्मले पनि उत्तिकै स्थान पाएको थियो । स्वयं बद्रद्धका चेला आनन्द तथा पछि अशोकका मानिसहरूसमेत यहाँ बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसार गर्न आएको घटनाबाट उक्त तथ्यको पद्रष्टि हद्रन्छ । यिनीहरूको पछिल्लो समयतिर शरणार्थीको रूपमा विभिन्न वंशहरू नेपाल पसेका थिए । जसमा शाक्य, मल्ल, कोलीय, लिच्छवि, आदि प्रमद्रख थिए । यिनीहरूको राम्रो बसोवासको व्यवस्था किराँतहरूले गरिदिएका थिए । यसरी विविध रूपमा यिनीहरूले आफ्नो सभ्यताको विकास गरेको देखिन्छ ।
किराँतहरूले लगभग झन्डै हजार वर्षसम्म शासन गरेको मानिन्छ । पछि लिच्छविहरूले उनीहरूलाई हराई शासन सत्ता आफ्नो कब्जामा पारे । यति लामो समयसम्म राज्य गरेका किराँतहरूको पतन कसरी भयो भन्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा भन्न सकिने आधारहरू त केही पनि छैन । पशद्रपति पद्रराणमा ‘किराँतहरूलाई सम्झाई बद्रझाई लिच्छविहरूले राज्य आफ्नो हातमा लिए’ भन्ने वर्णन परेको छ । तर आधद्रनिक विद्वानहरू त्यति लामो शासनसत्ता सजिलैसँग अर्कालाई बद्रझाए भन्ने विवरण मान्न तयार छैनन् । एकथरि विचारमा पश्चिमतिरबाट आएका राजपूतहरूले किराँत दरबारमा आक्रमण गरेर आफ्नो पक्षमा पारे र यी धपाइएका राजाको नाम कतै पटद्रक, कतै गलिज र कतै गस्ती दिइएको छ । अर्को महत्वपूर्ण विवरणमा पाटनको च्यासल टोलमा ८०० किराँतहरूको हत्या गरिएको थियो । च्यासल शब्दको अर्थ पनि ८०० हद्रने हद्रँदा यो तर्क निकै सान्दर्भिक पनि देखिन्छ । त्यस्तै, किराँत राजा पटद्रकको हत्या भएको हद्रँदा नै पाटन क्वावहाल नजिकको एक ठाउँको नाम ‘पटद्रको द्वँ’ रहन गएको पनि भनिन्छ ।
यसरी उनीहरूको पतनसम्बन्धी विभिन्न किसिमका विवरणहरू आए तापनि यिनमा कत्तिको सत्यता छ भनी स्पष्ट तोक्न बाँकी नै छ । तर पनि निकै लामो समयसम्म नेपालमा शासन गरेर नेपालमा प्रशासनिक व्यवस्थाको बीजारोपण गरेको, कला तथा वास्तद्रकलाको भरपूर विकास गरेको इतिहास हाम्रासामद्र छ । पछिल्लो समयमा शरणार्थी भएर पसेका विभिन्न राजवंशमध्ये विजिगिँसद्र स्वभावका लिच्छविहरूको नेतृत्वमा निकै ठूलो लडाइ भएको र उक्त लडाइँमा थद्रप्रै किँरातहरू मारिएको साथै नयाँ वंशको थालनी भएको इतिहास छ ।
Tarun Khabar0response सोमबार,२२ माघ २०७४ 96 Views